ထင်းရှူးစေး - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications, လျှောက်လွှာ
ထင်းရှူးစေး - ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပမှဗဓေလသစ်လျှောက်ထား၏လျှို့ဝှက်ချက်များ
၎င်း၏ထူးခြားသောသည်အနာပျောက်စေသောဂုဏ်သတ္တိကြောင့်လူသိများကတော့ပုံအသီးသီးသောအစေး။ အထူးသဖြင့်တန်ဖိုး oleoresin (- turpentine ဆေးပညာ) ဟုခေါ်ဝေါ်သောအာရဇ်ပင်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစည်အတွင်းရှိသစ်ပင်ရွေ့လျား၏ဗဓေလသစ်ဖြည့်မယ့်အရောင်, viscous ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထင်းရှူးစေး - ဖွဲ့စည်းပုံမှာ
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အင်္ဂါရပ်နဲ့အခြား turpentine နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် crystallization တစ်ဦးအနိမ့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအာရဇ်ပင်အစေး (oleoresin) နှင့်အတူသက်ရှိမနာကျင်ကျိန်းစပ်အရေးယူထားပါတယ်။ ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုနှင့်အတူပျော့ပျောင်းပေမယ့်သိသာအကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်သည်။ ထင်းရှူးစေးအောက်ပါအသုံးဝင်သောပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်:
Monoterpenes ။ turpentine ၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်သောမတည်ငြိမ်သောဓာတုပစ္စည်း။
Sesquiterpenes, diterpenes နှင့်၎င်းတို့၏အနကျအဓိပ်ပါယျ။ ကြားနေအစိတ်အပိုင်းများ, ဆေးပညာအဘို့ထဲကဓာတုပစ်စညျးတနျဖိုးအာရဇ်ပင် turpentine ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗဓေလသစ်အက်ဆစ် - lambertianic, abietic, levopimaric, sapinovaya နှင့်အခြားသူများ။
အက်စ်ကောဘစ်အက်ဆစ်, ဗီတာမင် D
Rezinoly, rezinotannoly နှင့်ရော်ဘာ။ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် cosmetology အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ပိုမိုမြင့်မားသောဖက်တီးအက်ဆစ် - palmitic, oleic, lauric, stearic နှင့်အခြားသူများ။
ထင်းရှူးစေး - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications
နည်းလမ်းမဟုတ်သက်ဆိုင်သောအားဖြင့်ဖော်ပြထားစင်ကြယ်သောပုံစံထဲမှာ, ဗဓေလသစ်လေကြောင်းနှင့်အဆက်အသွယ်အပေါ်လျှင်မြန်စွာ solidifies, ဒါပေမယ့်မည်သည့်ရေနံအတွက်ဿုံပျော်ဝင်။ Turpentine အလွန်ထိရောက်သောထုတ်ကုန်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သာကုထုံးများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောသည် prophylaxis အသုံးမဖြစ်ပါတယ်။ ကုသမှုမပြုမီကအထူးအာရဇ်သစ်သားဗဓေလသစ်သည်အဘယ်အရာထွက်ရှာရန်အရေးကြီးပါသည်, turpentine ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ပျက်ဆီး, ထဲကဓာတုပစ်စညျးဖွဲ့စည်းမှုအသေးစိတ်ကိုသမားများကသုတေသနပြုခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများအတွက်ရရှိနိုင်ကြသည်။ ၎င်း၏လျှောက်လွှာ၏ထုတ်ကုန်မှ contraindications သို့မဟုတ်သည်းမခံ၏မျက်မှောက်၌ပေးဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
Oleoresin အာရဇ်ပင် - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ
ပစ္စည်းဥစ္စာအားဖြင့်ကိုယ်စားပြုအားလုံးရောဂါများများအတွက် panacea သည်မဟုတ်, ကရောဂါဗေဒ, အများအားဖြင့်ပြင်ပ, များစွာသောကူညီပေးသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအာရဇ်ပင်ဆေးဖက်ဝင်အရည်အသွေးတွေ Oleoresin နေသောခေါင်းစဉ်:
mestnorazdrazhayuschee (အာရုံ) ။
ဤရွေ့ကားဝိသေသလက္ခဏာများအောက်ပါကိစ္စများတွင်ထိရောက်သောထင်းရှူးစေးကူညီပေးသည်သောရောဂါများ, ထုတ်ကုန်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် Application များစာရင်းကိုစေ:
အသားအရေနှင့်ပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးဒဏ်ရာ (ဒဏ်ရာများ, အပူလောင် );
အဆစ်နှင့် musculoskeletal စနစ်၏ရောဂါများ;
အဆိုပါသိုင်းရွိုက်နှင့်အခြား endocrine ဂလင်းပုံမမှန်;
Oleoresin အာရဇ်ပင် - contraindications
ကောင်းစွာလူအများစုအားဖြင့်သည်းခံသဘာဝထင်းရှူးထုတ်ကုန်။ : အသုံးပြုမှုကိုထင်းရှူးစေးများအတွက်တားမြစ်ထားသောအလွန်ရှားပါးအခြေအနေများ, အောက်ပါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းထိခိုက်နစ်နာစေသတည်းရန်စေး၏ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်
coniferous turpentine ၏ idiosyncrasy;
တစ်ဦးပြင်းထန် form မှာနာတာရှည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ။
အဓိကအားဖြင့်ပြင်ပတွင်ဗဓေလသစ်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ အတွင်းပိုင်းတက်ကြွပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် 10% ၏အာရုံစူးစိုက်မှုရှိခြင်းသာ turpentine ရေနံဖြေရှင်းချက်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ချမ်းသာပိုးစာ (20-50%) သာပြင်ပအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။ လက်ရှိအခြေအနေများနှင့်သက်ရှိများ၏ပြည်နယ်ပေါ် မူတည်. အာရဇ်ပင်ရည်ကိုသုံးပါဖို့ဘယ်လိုပေါ် Options များ, အများကြီး။ နည်းလမ်းစဉ်းစားရန်အကြံပြုသောအဘို့အသုံးအများဆုံးပြဿနာများကို:
ဆရာဝန်အတွင်းရှိဗဓေလသစ်၏အသုံးပြုမှုကိုအတည်ပြုပြီဆိုရင်, ကုထုံးနိမ့်ဆုံးထိုးနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ထင်းရှူးစေးနံနက်စာမတိုင်မီ 20-35 မိနစ်ဖြစ်နိုင်ရင်နံနက်ယံ၌, တစ်နေ့လျှင် 2-3 ပေါက်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ကအကြံပြုသောက်သုံးသောရောက်ရှိသည်အထိတဖြည်းဖြည်းတစ်ဦးသောအဘို့ကိုတက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အများဆုံးသတ်မှတ်ထားသောအိုင်အိုဒင်း - 1 tbsp ။ အထောက်အထားပေါ် မူတည်. 5-10% ၏ရေနံဖြေရှင်းချက်၏ဇွန်း။
အဆစ်အဘို့အ Oleoresin အာရဇ်
အဆစ်, sciatica, osteochondrosis, အဆစ်နှင့်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောဖော်ပြထား turpentine ကျောရိုးဘေးတိုက်စောင်းကွေး ။ စုစည်း (20-25%) အာရဇ်ပင်ရည်အသုံးပြုခြင်း, လျှောက်လွှာအနှိပ်များနှင့်ထိခိုက်ဒေသများပွတ်နယ်တစ်သင်တန်းနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ နာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေးအဘို့နှင့်ရွေ့လျား၏ပုံမှန် 12-15 အစည်းအဝေးများလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြည်တွင်းရေးဧည့်ခံသောအာရဇ်ဆီအာရဇ်ပင် oleoresin အကြံပြုနိုင်ပါသည်များအတွက်ထို့အပြင် 5% solution ကို၏အသုံးပြုမှုကိုဒေသခံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ ကုသမှုသင်တန်းများနွေဦးနဲ့ဆောင်းဦးအတွက်,2ကြိမ်နှစ်ကထွက်သယ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်းအတွက်, cellulite နှင့်ဗဓေလသစ်တစ်ခုရေနံဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. ရေနွေးငွေ့နှင့်အတူအကူအညီ trituration sagging ခြုံငုံရှိနေခြင်း။ ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းရေးအလေးချိန်၏တစ်လပြီးနောက် 7-10 ကီလိုဂရမ်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့လမ်း - ဘေးရီးယားထင်းရှူးစေးသန့်ရှင်းရေး။ အဆိုပါသင်တန်းကိုတစ်ဦးဆေးထိုးအပ်ယူနစ် 40 နှင့် 10% ၏ဗဓေလသစ်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ရေနံဖြေရှင်းချက်မပါဘဲအင်ဆူလင်ပြွတ်တောင်းမည်ကထွက်သယ်ဆောင်ရန်, 79 ရက်အတွင်းကြာရှည်ခံသည်။
သန့်ရှင်းရေး၏ sequence ကို
နေ့စဉ်ဆေးထိုး၏တိုးတက်မှုနှင့်လျော့ချရေး၏ပြဌာန်းခွင့်။ သူတို့ကခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်အပေါ်မှီခိုဖြစ်ကြပြီးတစ်ခုအင်ဆူလင်ပြွတ်၏စံကိုက်ညှိအတွက်တွက်ချက်နေကြသည်။5ယူနစ် - 80 ကီလိုဂရမ်ရန်။ 80-100 ကီလိုဂရမ် - 10 bar ကို။ 100 ကျော်ကီလိုဂရမ် - 15 ယူနစ်။
ပထမဦးဆုံးဧည့်ခံ။ ပထမဦးဆုံးထုတ်ကုန်များ၏ 0,125 ml ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒီအပြွတ်5ယူနစ်။
မြင့်တက်ဆေးညွှန်း။ အဆိုပါ 2nd နေ့မှစ. ယူနစ်ထက်ပိုဗာလစံစေး၏တွက်ချက်အရေအတွက်အားဖြင့်စားသုံးရပါမည်။ ဥပမာ, စတင်. သောအဘို့ကိုလျှင် - 15 ယူနစ် - 5, ထို့နောက်နောက်နေ့ကြောင့်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ 10. ဖြစ်လိမ့်မည်။ လာဘ်ရက်ပေါင်း 40 အထိဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ထိုးလျော့ချရေး။ 41 ကြိမ်မြောက်တစ်နေ့တာတစျပိုငျးကိုတွင်အလားတူစွမ်းရည်လျော့နည်းစေပါသည်။ 79 by နာရီကစတင်ထိုးညီမျှဖြစ်ရမည်။
ကုထုံးခင်မှာအမြဲတစ်ဦးမျက်စိအထူးကုဆရာဝန်နှင့်အတူတိုင်ပင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အာရဇ်ပင်ရည်၏လွတ်လပ်သောနှင့် unsupervised ကုသမှုအန္တရာယ်ကြောင့်ဆိုးကျိုးများနှင့်ပင်ရူပါရုံကိုဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သွတ်သွင်း turpentine ရေနံဖြေရှင်းချက်များအတွက် 3% မှအာရုံစူးစိုက်မှုလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအိပ်ရာဝင်ချိန်မတိုင်မီတစ်နေ့လျှင် 1 အချိန်ဖျော်ဖြေ, ဒါမှမဟုတ်နံနက်ယံ၌ချက်ချင်းအဝတ်လျှော်ပြီးနောက်, ဒါမှမဟုတ်ညနေပိုင်းတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 1 တစ်စက်ချင်းစီမျက်စိ mucosa များအတွက်ကိုဆိုလိုပါတယ်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် 5-20 မိနစ် Hood lids နှငျ့အတူအိပျရပါမည်။ 1 လ 1 ကုသမှုတစ်နှစ်အကြံပြုခဲ့သည်။
ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းအလှကုန်ချို့ယွင်းချက်များ၏ရှေ့မှောက်၌သာ 15-25% ၏အာရုံစူးစိုက်မှုမှာ Topic ကိုအသုံးပြုသည်။ ထင်းရှူးစေး, အရေပြား elasticity တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသည်နည်းနည်းအရေးအကြောင်းတွေ, အဇီဝြဖစ်မှုကိုလှုံ့ဆော်။ ဒါဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတို့၏ရောဂါကိုငြိမ်းနှင့်ရောင်ရမ်းဖိနှိပ်, အမာရွတ်နှင့်ကာကွယ်ပေးသည် Post-ဝက်ခြံ ။
အာရဇ်ပင်အစေး - မျက်နှာအဘို့အလျှောက်လွှာ
ရည်ဖဲလိုင်းများနှင့်အတူအလင်းမျက်နှာနှိပ်နယ် Making2ကြိမ်သီတင်းပတ်ကကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်အရေပြားအပေါ်ယံသို့သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုပွတ်နယ်။
ဗဓေလသစ်ဖြေရှင်းချက် 100 ml ကိုနှင့်2x ကိုလက်ဖက်ရည်သစ်ပင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံမျက်ရည်စက်လေးတွေအရောအနှောတွေနဲ့မျက်နှာသုတ်ဖို့ဝက်ခြံ3ကြိမ်နေ့ဖြစ်၏။
ဆံပင်ကောက်ကောက်၏စောင့်ရှောက်မှုအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု - အမြစ်နှင့်ကြီးထွားဆွခိုင်ခံ့စေ။ ထို့အပြင်အာရဇ်ပင်အစေးဟာဆိကြည်ဂလင်းပုံမှန်နှင့်ဆံပင်၏အသွင်အပြင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ဒါဟာအားနည်း antifungal အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်, ဒါကြောင့် seborrhea နှင့်ဘောက်၏ကုသမှုတွင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အာရဇ်ပင်တစ် 25% oleoresin တစ်မျက်နှာဖုံး monocomponent အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်
အဆိုပါဆံပင်ကောက်ကောက်၏တစ်ခုလုံးကိုအရှည်မှဖြေရှင်းချက် Apply ။
တစ်ဦး Bun သို့ strands စုဝေးစေနှင့် cellophane နှင့်တစ်ဦးသုတ်ပဝါအတွက်ခြုံ။
ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 1 အပတ်တိုင်း။
ဒါက burdock အမြစ်ဆကျဆံ?
စိန့်ဂျွန်ရဲ့ Wort ရေနံ
ဆန်, ဆီ - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications ချက်ပြုတ်နည်းများ
ရှူရှိုက်မိပါ nebulizer ခြောက်သွေ့တဲ့ချောင်းဆိုး
Seabuckthorn - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications
အမျိုးသမီး Melissa - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
Sophora japonica - လျှောက်လွှာ
အဆိုပါ drywall အတွက်အပေါက်ဖွင့် patch ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Chrissy Teigen အဆိုပါဂျိုးကြားဖို့အလျားလိုက်အပေါက်နဲ့စားဆင်ယင်ဝတ်ထား, မျက်နှာပျက်ခြင်းရှိကြ
Hacking 30 ရက်တောက်ပအတွင်းပိုင်းဘဝ
ကော်ဖီနှင့်ဘရန်ဒီ - အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး
စားဆင်ယင် Oksana Mukha
ပင်စိမ်း - လျှောက်လွှာ
ဘယ်လို goulash ချက်ပြုတ်ရန် - နှင့်အရသာဟနျဂရေီဟင်းလျာများ၏အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ
မင်းသားဟယ်ရီနှင့် Meghan Markle နောက်ဆုံးတွင် paparazzi မှန်ဘီလူး hit
ပြတင်းပေါက်ထားလိုက်တော့၏ installation ကို
ဒါဟာစိတ်တွင် fit ပါဘူး: လူတိုင်းကိုတုန်လှုပ်ခြောက်ခြား 16 ဖြစ်ရပ်မှန်များ